Red Nose Pitbull: Ihe Knowmara Tupu yingzụ - Reeddịrị
Red Nose Pitbull: Ihe Knowmara Tupu yingzụ
O nwere ike ịbụ na ị nụla banyere onye na-acha uhie uhie na-acha ọbara ọbara ma gịnị banyere Red Nose Pitbull?
The Red Nose Pitbull bụ uhie uhie na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie.
Ha bụ otu n'ime Pitbulls kachasị ewu ewu gburugburu na dika ndi ozo ndi ozo, ha kwesiri ntukwasi obi ma chebe ha ..
N'adịghị ka nkwenkwe a ma ama na nke a abụghị nkịta dị egwu. Onye ọ bụla nke jiri oge ọ bụla na ìgwè a mara na ha bụ n'ezie otu n'ime nkịta na-atọ ụtọ na nke kacha mma.
Ichere na Pitbull Red Nose nwere ike ịbụ nnukwu mgbakwunye n'ụlọ gị?
Nọgide na-agụ iji mụta ihe niile ị kwesịrị ịma banyere ụdị a ...
Red Nose Pitbull Na Nlele
Bdị Udiri Oyiyi
Red Nose Pitbull Isi
Daybọchị Na Ndụ nke Bdị A
Akụkọ ihe mere eme na mmalite
Iwe na Àgwà
Ego Ole Ka Otu Imi Mgbapu Na-efu?
Red Imi Pitbull Ọdịdị
Red Nose Pitbull Care Guide
Etu ị ga-esi Zụọ Rednose Pitbull Terriers
Pitbull Red Nose a dị ụtọ dị ka shuga ma hụ ka ndị ezinụlọ ya gbara ya gburugburu.
The Red Nose Pitbull bụ nkịta aja aja na-acha uhie uhie nwere imi na-acha ọbara ọbara iji kwekọọ. Ọ bụ ezie na Pitbulls nwere ọtụtụ agba dị iche iche, Nose Red bụ otu n'ime ndị kachasị ewu ewu. A maghị nkịta ndị a naanị maka imi na-acha ọbara ọbara kamakwa maka nnukwu obi ha na mkpụrụ obi dị nro.
Ewu ewu: # 3.
Ọpụrụiche: Ibe / Ọrụ.
Arọ: 30-60 pound.
Ahịa: $ 450- $ 2000.
Mmadụ: Obi ike, maa mma ma na-eguzosi ike n'ihe.
Ahịa : $ 2000- $ 5000
Afọ ndụ : 10-13 afọ
Ezigbo ezinụlọ : Ee
Nha : 30-150 pound
Shed : Dị ala
Ọrụ : Ọkara / Elu
Ahịa : $ 300- $ 2000
Afọ ndụ : 12-14 afọ
Nha : 22-40 pound
Red Imi Pitbull
Ahịa : $ 1000- $ 2000
Afọ ndụ : Afọ 10-15
Nha : 30-60 pound
Ewu ewu na American Pitbull Terrier nyere ịrị elu a dị iche iche nke agba dị iche iche .
Otu n'ime ụdị agba ndị kachasị ewu ewu bụ Red Nose Pitbull.
Nke a pup mara maka ha mara mma ọbara ọbara aja aja aji na cinnamon acha imi ka dakọtara.
Ha nwere aru siri ike ma na-eburu onwe ha mgbe niile n'ụzọ obi ike.
Ọ dị nwute na nkịta nkịta a enweela nsogbu n'oge gara aga dịka a na-azụ ha na mbụ maka ịba ehi na ịlụ ọgụ. Nke a mere ka agbakwunye ibu aha ha dị ka nkịta na-eme ihe ike .
Ọ dabara na mgbe amachibidoro ịlụ ọgụ na ndị omekome, ndị mmadụ malitere ịhụ ezigbo ikike ndị a na-arụsi ọrụ ike.
Nke bụ eziokwu bụ na pooch a bụ onye hụrụ n'anya, ọ bụghị onye agha.
Nke a enyi na enyi hụrụ goofball n'anya na-eme dị ka ibu nwa nkita.
Nnọọ ịhụnanya na cuddly.
Enwere ike ịzụ gị ichebe ụlọ gị.
Otu n'ime agba aji kachasị dị mfe ịchọta.
Ezigbo nzube niile na-arụ ọrụ na nkịta ezinụlọ.
A machibidoro ha iwu ụfọdụ.
Na-ata ahụhụ site na aha ọjọọ.
Chọrọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Adịghị na ndị ọzọ na udiri anumanu.
Igwe uhie uhie gị ga-adị n'akụkụ akwa gị abalị niile.
Ha ga-eche ka unu abụọ bido ụbọchị ọnụ.
Ezigbo nri ụtụtụ na ịgagharị gburugburu ebe ahụ bụ ụzọ kachasị mma isi bido ụbọchị ọ bụla.
Gị pooch ga-achọ ọtụtụ ịhụnanya na nlebara anya tupu ị gawa ọrụ. Ozugbo ha nwere obi iru ala na ijide n'aka nloghachi ha, ha ga-anọ jụụ na igbe ha ma ọ bụ ebe ọzọ dị mma n'ụlọ ahụ ịnọ na-eche gị.
Mgbe ị lọtara ọrụ na nri ehihie, olulu gị ga-eme ka ị sutu ọnụ.
Ha nọ na-eche ụbọchị niile ka ị lọta ụlọ wee kporie ndụ.
Ugbu a bụ oge igwu egwu.
Were nkịta gị gaa n'ogige ntụrụndụ kpọọ ma ọ bụ jide ma ọ bụ hapụ ha ka ha soro ndị enyi ha anọ nwere ụkwụ.
Mgbe gị na ndị enyi gị na-egwuri egwu nkịta gị ga-ejide n'aka na ị bụkwa akụkụ nke egwuregwu ahụ. Ga-enwekọ ọnụ ọnụ ọnụ nke na n'ehihie ahụ ga-efe.
Youlaghachi n’ogige ahụ, ọ ga-abụ oge iri nri abalị.
Mgbe nke ahụ gasịrị, Rednose Pitbull Terriers ga-emecha dịrị njikere izuike ma zuru ike - lelee TV ọnụ ma nwee nnọkọ na-ehi ụra. A na-enwe ekele maka mgbede na ezumike mgbe ụbọchị ogologo ọrụ na egwuregwu dị otú ahụ gasịrị.
N’abalị ịlakpu ụra, enyi gị ọbara ọbara ga-esonyere gị n’akụkụ àkwà gị ma ọ bụ ọbụ ịgbago n’elu ụkwụ akwa gị.
Ebu ụzọ American Pitbull Terrier dị na England.
Site na ebe a Pitbull gara Ireland ebe Red Nose Pitbull zụrụ na oge mbụ.
Aha Pitbull bụ ntụaka maka ha mbụ ọrụ dị ka a ehi baiter . A na-etinye ngwungwu nkịta ndị a n'ọgbọ egwuregwu nwere otu oke ehi na igwe mmadụ na-ele ka nkịta ga-anwa ịkpọrọ ehi ahụ.
Naanị nkịta ndị a na-azụ maka ịkpa ike nwere ike ịrụ ọrụ dị otú ahụ ka ndị na-azụ anụ ga-ama ụma jikọta nkịta kachasị ike.
Azụkwara nkịta ka ọ na-eme ihe ike site n'iji ntaramahụhụ na ntaramahụhụ siri ike.
Mgbe amachị ehi na-amachibidoro ịgbado anya gbanwere gaa na ịlụ ọgụ .
Ọ dabara nke ọma na a machibidola omume a jọgburu onwe ya ugbu a mana aha Pitbull dị ka onye ọgụ kpụ ọkụ n'ọnụ ka dị.
Dika ewu ewu a na-ewu ewu na Steeti ha mechara nye ha American Pitbull Terrier.
Ọ dị nwute na agbanyeghị ka amachibidoro ụdị a n'ọtụtụ obodo.
A na-etinye ụdị ahụ n'ụzọ ụgha dị ka anụmanụ na-awakpo dị ize ndụ.
A na-arụ ọrụ iji nyere ìgwè a aka ịkwụsị aha ọjọọ ya na izu kpọmkwem iwu na-adịwanye nkịtị kwa afọ.
A na-atụ anya na afọ ndị na-abịanụ ka a zụlitere iji gosipụta ụdị agbụrụ a.
Eziokwu 6 Na-atọ ọchị
Red Nose Pitbull si na Ireland pụta, ọ bụghị United States.
Ebe ọdịdị ha mere ka ha bụrụ nhọrọ a ma ama maka nkịta na-eche nche, ha nwere ike ịbụ enyi onye omekome karịa ịnwa ịtụ ụjọ.
A maara obere oge dị ka nkịta nkịta n'ihi ịhụnanya ha nwere n'ebe ụmụaka nọ. Ọtụtụ ndị nwe ụlọ tụkwasịrị nkịta ha obi na-elekọta ọrụ nwa ha.
O di nwute na udiri a bu otu n'ime ihe ndi mmadu na-achota nke iwu. Otutu ndi otu ndi otu aka oru raara onwe ha nye ka ha mata ihe banyere Pitbull ma obu mechie ndi isi obodo.
Red Nose bụ otu n'ime ọtụtụ agba pụrụ iche nke ụdị a nwere ike ịnwe - ị ga-ahụ ụdị a na ụdị agba ọ bụla (gụnyere acha anụnụ anụnụ na brindle).
Ọ dị nwute na ìgwè a amabeghị American a n'ihi nsogbu ha gara aga.
Red Nose Pitbull bụ otu n'ime dogest nkịta gburugburu .
Ha na-achọ naanị ka ha na ezinụlọ ha na-anọrị, obi ga na-adịkwa ha ụtọ na ha bụ ndị ezinụlọ ha.
Dị ka ụdị anụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'agbanyeghị na ha na-arụsi ọrụ ike ma ọ dị mkpa ka ha nọrọ n'ọrụ.
Mgbe ha na-enwe obi ụtọ, ha ga-anọ ogologo ụbọchị na-egwu egwu tupu ha adị njikere ịgbago n'ihe ndina ha.
Ha na-enwe obi uto egwuregwu doggie dị ka ikuru ma ha na-ahụ agility na rally.
Kwesịrị ịtụ anya ntakịrị mkpọtụ mgbe pooch a na-enwe ọ excitedụ ma ọ bụ na-egwuri egwu, ma ọ bụ mgbe ihe na-adịghị mma gburugburu ụlọ.
Agbanyeghị, Pitbull a zụrụ nke ọma ekwesịghị ịda mba na ndị agbata obi ma ọ bụ anụmanụ ndị ọzọ.
Maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ị kwesịrị malite iso na-akpakọrịta ha dị ka nwa nkita.
Ikwado ndi mmadu na ndi ozo na nkita kwesiri idi nkpa iji mee ka ndi a mara ihe. Olulu bụ nkịta na-elekọta mmadụ nke na-achọsi anya na ọbụbụenyi.
Cheta na nkịta a anaghị agakọ nke ọma ma nwee ike ịchụ obere nkịta na nwamba.
Ọ bụla Pitbull nke na-egosipụta iwe ma ọ bụ na-akpali ndị ọzọ ka a zụọ ha n'àgwà a ozugbo enwere ike.
Pumụ nkịta na-eto eto taa aru iji nwaa ezé ọhụrụ ha, ebe nkịta merela agadi nwere ike ịta ụta ma ọ bụrụ na ụjọ na-atụ ya ma ọ bụ nwee obi erughị ala.
Ihe nlereanya Red Nose Pitbull bụ enyi na enyi, mmekọrịta mmadụ na nnọọ smart.
Ha na-eme nkịta ezinụlọ mara mma ma ọ ga-atọ ha ụtọ ịmụ ụmụ gburugburu. Bredị a dị mma maka ndị di na nwunye ma ọ bụ maka ezinụlọ nwere ụmụaka gafere afọ 6 ebe a ga-enye ha ọtụtụ ịhụnanya na nlebara anya ụbọchị niile.
Ọ bụrụ na ị gosi nkịta a ịhụnanya na nkwanye ùgwù kwesịrị ha, ha ga-enye gị iguzosi ike n'ihe na-agaghị akwụsị akwụsị.
Dị ka Red Nose Pitbull bụ ihe nkịtị ha dị ọnụ ala karịa agba ndị ọzọ.
I kwesiri ịtụ anya ịkwụ ụgwọ ihe ruru $ 1000 maka nwa nkita.
Ọnụahịa mbido na-adabere na ebe ịchọtara enyi ọhụrụ gị.
Na ebe obibi ị ga-akwụ ihe ruru $ 350 maka gị Red Nose na ego a ga-enweta ga-aga na-enyere ndị ọbịa aka lekọta anụmanụ ndị ọzọ.
Ebe ọ bụ na agba dị ebe niile, ha bụ nzọ kacha mma maka onye na-achọ Pitbull na mmefu ego.
Nwa nkita $ 1000- $ 2000
Okenye $ 600- $ 1000
Nkuchi $ 350- $ 450
Ndụmọdụ Ndị Ọzụ
Pitbull Red Nose bụ otu n'ime agba Pitbull ndị a na-ahụkarị nke mere na ha na-abụkarị Pitbull ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.
Site na onye na-azụ ihe ị kwesịrị ịtụ anya ịkwụ ụgwọ opekata mpe $ 1,000 maka nwa nkịta Red Nose.
Ọ bụrụ na nke a dị oke ọnụ maka gị wee tụlee ịnweta otu site na ndo - ọ dị nwute na ụdị a bụ otu n'ime anụ ụlọ na-ahụkarị na mba ahụ.
Ikwesiri itule ihe di nkpa na mmefu ego gi. Ihe ndị dị ka njikota, nkịta nkịta na ihe egwuregwu nwere ike tinye $ 250 ọzọ na mkpokọta ego.
Nkịta a amaghị ike nke ha, ọ ga-adọka ọtụtụ ihe ụmụaka ji egwuri egwu. Ikwesiri ịtụ anya imefu ma ọ dịkarịa ala $ 65 kwa ọnwa ole na ole iji dochie ihe ụmụaka ji egwuri egwu nke Pit gị nwere ike ibibi.
N'ụzọ dị ịtụnanya na nkịta a enweghị ọkọlọtọ gọọmentị.
Otú ọ dị i nwere ike na-atụ anya a ọkara sized muscular nkịta .
Ha nwere okpokoro isi sara mbara nke nwere oghere buru ibu na nnukwu ọnụ ọchị.
Ntị ha nwere ike iguzosi ike ma ọ bụ nwee ntakịrị okpukpu ma ha ekwesighi igbutu . Dị ka aha ha na-egosi na ha nwere imi aja aja na-acha ọbara ọbara ma nke a nwere ike ịmịcha agba dabere na oge.
N'ozuzu nke a bụ nkịta siri ike ma nwee obi ike ile anya.
Nwere ike ịtụ anya na nwoke Nose Red ga-eguzo n'etiti 18-21 sentimita asatọ ogologo ma tụọ n'etiti 35-60 pound.
Mamụ nwanyị dị ntakịrị ntakịrị wee guzoro n'agbata 17-20 sentimita asatọ ma tụọ n'etiti 30-50 pound.
Karịsịa nnukwu Pitbulls nwere ike itolite na 70 pound ma ọ bụrụ na ha bụ nwoke na 60 pound ma ọ bụrụ na ha bụ nwanyị.
Nkịta a nwere uwe na-acha aja aja mara mma.
Mgbe ụfọdụ ha nwere afọ ọcha na ihu kwa.
Nkịta a nwere uwe dị mkpụmkpụ ma sie ike nke dị mkpụmkpụ. Nwere ike ịnwe akwara nkịta a n'okpuru uwe ha ka ị na-azụ ha.
Ọ dabara nke ọma na ha nwere obere aji ha anaghị awụfu ọtụtụ.
Ebe Red Nose Pitbull bụ ụdị nkịta pụrụ iche ha achọghị nlekọta pụrụ iche.
Onye nwe ya n'anya ma nwee obiọma bụ na nkịta a chọrọ inwe anụrị na ahụike.
Nkịta a chọkwara onye nwe ya na-arụsi ọrụ ike nke nwere ike ịgba gburugburu ma kpọọ egwu ụbọchị niile. Ekwesighi ịhapụ ha naanị ha ruo ihe karịrị awa ole na ole n'otu oge, yabụ ndị nwe ụlọ na-abịaghị kwesịrị itinye akwụkwọ.
Ọ na-eme nnukwu okwu mmeghe nye ndị na-emegbu mmadụ ga-achọkwa ịbụ ezigbo enyi gị.
Nke kachasị onye nwe Red Nose Pitbull ga-agbasosi ike na ọzụzụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ndụ ya dum.
Nkịta ndị a chọrọ ọ dịkarịa ala otu awa mmega ahụ kwa ụbọchị.
Nwere ike kewaa nke a n'etiti ịga ije na ịgba ọsọ.
A ghaghị idobe ụdị anụ ọhịa niile na nkedo ha mgbe ha na-apụ ije - ị ga-emerịrị egwuregwu egwu na mpaghara dị nchebe. Can nwere ike ịga ije ha maka minit 30 kwa ụbọchị wee tinye minit 30-40 nke egwuregwu iji mezue ụbọchị nkịta gị.
Rungba ọsọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị amasị ha iji kwado.
Bredị a ga-egwu ihe ọ bụla gụnyere ịbịaru, njide na mkpado. Otú ọ dị, ha na-eme nke ọma na nchịkọta nke na-agwakọta nrubeisi na obi iru ala.
Na-arụ ọrụ kwa ụbọchị: Nkeji 60.
Ọkwa Ọrụ: 4/5.
Ọrụ Na-amasịkarị: Rally.
Nke a Red Pitbull's Uwe mkpụmkpụ ma dịkwa njọ dị mfe ịlụ.
Iji mee ka uwe ha na-acha uhie uhie mara mma na-enwu gbaa, ị ga-ehicha ha otu ugboro n’izu.
N'oge opupu ihe ubi na udu mmiri ị nwere ike ihu ntutu ole na ole dara ada karịa ka ọ dị na mbụ. Nke a bụ n'ihi na nkịta gị na-akwadebe uwe elu oge ha. N’oge a, ị ga - ehicha ha ugboro abụọ n’izu ụka.
Olulu dị mkpa karịa nhicha karịa nchacha (karịsịa na ihu na ntị). Saa pup gi n ’onwa ole na ole jiri igwe ncha na edozi.
Ọ bụrụ na nkịta gị nwere okpukpu ihu mgbe ahụ ọ dị ezigbo mkpa idebe ihu ha ọcha. Jiri nhicha ihu dị nro ma ọ bụ nkpuchi nkịta na-eme ka ọ ghara ikpokọta imi, anya na ọnụ. Mee mkpịsị aka ha kwa izu abụọ ma ọ bụ atọ ma kpochapụ ezé nkịta gị otu ugboro kwa izu. Ọ nwere ike isiri gị ike ịnwe nkịta gị ka ị nwee ekele maka ntacha eze ka ị nwee ike kpalie ha iji ezé ezé ma ọ bụ ọgwụgwọ eze.
Onye na-arụsi ọrụ ike ma nwee anụ ahụ dị ka nke a chọrọ ọtụtụ protein.
N'ezie protein kwesịrị ịbụ ihe izizi na nri ha. Protein site na ezigbo anụ na-akwalite ahụ ike ahụ ike na uto.
Red Nose Pitbull ga-achọ ihe ruru 1000 kalori ụbọchị nke nnukwu protein kibble ma ọ bụ nke nwere anụ adịghị.
Nwere ike kewaa nke a gafee nri 2 (ụtụtụ na anyasị). Ekwesịrị inye nri kachasị ọkụ nke nkịta gị mgbe ha malitere ikuku na njedebe nke ụbọchị. N'oge nri abalị ọ dị mma inye ha ọkara iko karịa inye iko. Nri kachasị ha kwesịrị ị bia na nri ụtụtụ.
Otutu nri nkịta ahụ kwesịrị ịbụ protein na abụba dị mma nke sitere na ihe ndị sitere n'okike karịa mgbakwunye na ihe ndị ọzọ.
A ga-enye obere obere ọgwụgwọ.
N’agbata ọnwa abụọ na ọnwa isii nkịta gị ga-eru ọkara nke okenye ha. Nke a kwesịrị ịbụ 20-30 pound maka nwoke na 15-18 pound maka nwanyị.
Nkịta gị kwesịrị iruzu oke ha obere oge ka amụrụ ha. Maka nwoke, nke a kwesịrị ịdị n'etiti 40-60 pound (ma ọ bụ ruo 70 maka oke Pitbulls). Mamụ nwanyị ga-eru 30-50 pound.
Ebe Red Nose Pitbull bụ otu ìgwè siri ike, a ka nwere ihe ole na ole ịchọrọ iji lezie anya.
Patellar okomoko bụ nkwonkwo nkwonkwo nke a na - eme na obere nkịta mana ọ nwere ike imetụta nkịta dị obere dịka Pitbull. Nke a na - eme mgbe patella anaghị akwụsi ike ma na - Ọ na-ebute mgbu na ahụ erughị ala, nsogbu mmegharị na ngwụsị ngwụsị. Ọgwụgwọ dabere na ọkwa ọnọdụ dị na ọ dị oke ikpe na ha ga-achọ ịwa ahụ. Na ogbo 1 na 2 patella nwere ike ibughari aka. Agbanyeghị na oge atọ ma ọ bụ 4 patellar luxation fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile chọrọ ịwa ahụ iji dozie.
Degenerative myleopathy bụ otu n'ime ọnọdụ kachasị njọ nke ụdị a nwere ike ịzụlite. Ọ na - apụtakarị na nkịta ọ dịkarịa ala afọ 9. Ọnọdụ a na-eme ka ọkpụkpụ azụ na-ebelata ma nwee ike ibute ahụ mkpọnwụ zuru oke na nke ikpeazụ. Ihe ịrịba ama ndị mbụ na-agụnye ịdọrọ akụkụ ahụ na nkwụsị nke nhazi na nhazi. Ihe nkwonkwo ahụ nwere ike ịgbachi site n'oge ruo n'oge ka ọnọdụ ahụ na-aga n'ihu. Mkpọnwụ nke mkpịsị aka azụ na ngagharị nke ngagharị ga-emecha soro. O di nwute na onodu bu onodu 100.
Ogologo oge ole ka oghere onu uhie na-adị ndụ?
Pitbull Red Nose nwere ike ịdị ndụ n'etiti afọ 10 na 15.
Kwesịrị ịmalite ọzụzụ Rednose Pitbull Terrier ozugbo ị kpọbatara nwa nkịta gị.
N'oge ọzụzụ ị ga-anọgidesi ike mgbe niile.
Na-akwanyere nkịta gị ùgwù mgbe niile na ọ ga-akwanyekwara gị ùgwù.
Ọchịchọ nkịta a na-achọ ime ndị ọzọ obi ụtọ pụtara na ha na-aza nke ọma ịja mma maka omume ọma. A na-eleghara omume ọjọọ anya dị ka nwa bekee na-anwa ịdọta uche gị.
Nohụnanya na otuto na-akpali Red Nose Pitbulls karịa ọgwụgwọ.
Ya mere, mgbe ha mezuru iwu nyere ha otuto n'ụzọ ziri ezi site n'inye ha ịhụnanya na mmetụta na-ekpo ọkụ.
Mgbakwunye mmadụ dị ezigbo mkpa maka ụdị a. Ga-akpọrọ nkịta gị ebe ọ ga - eme ka gị na ndị ọzọ nwee nkịta. Otu klas ọzụzụ enyi na enyi ga-esiri ike ịchọta ya, ọ ga-adị mkpa ka ọtụtụ n'ime ọzụzụ a na-eme n'ụlọ.
Nwa nkita gi kwesiri inwe nchedo ma mekwaa ya ka gi na nkita ndi ozo nke yiri oke na agwa ya.
Ọzụzụ bụkwa ezigbo ụzọ iji kpalie ha.
Boredom bụ ọnọdụ kachasị amasị Pitbull ma ọ fọrọ nke nta ka ọ na-eduga mgbe niile na-ebibi omume.
Pedọ eriri bụ egwuregwu dị egwu maka ọzụzụ na ime ka uche ha dị nkọ. Mgbe ị na-egwu egwu ị nwere ike ịnwe iwu dị ka ịnọdụ ala, nọrọ, dobe ya wee pụọ.
Ọ ga-adị mkpa ka uche ha dịrị n’echiche ha iji gbochie omume ọ bụla na-emebi ihe.
Ya adịla mgbe ị ga-elelị ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi karịa obere obere anya ọma ndị ahụ.
Dika udiri udiri Terrier nwere ike zuta ha maka oru di iche iche.
A na-arụrụ ha ọrụ dịka ndị nche ma ọ bụ nkịta na-eche nche. A na-azụ ụdị ahụ mgbe ụfọdụ dị ka nkịta ọrụ ma ọ bụ ndị uwe ojii K-9.
Ekwela ka Red Nose Pitbull's akụkọ ihe mere eme na-adịghị mma.
Nkịta a na-atọ ụtọ dịka shuga ma chọọ ka a hụ ya n'anya.
Inweta ụdị a bụ afọ iri nke nkwa nke ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịme.
Ezinaụlọ raara onwe ha nye nwere ụmụaka toro eto n'ụlọ ga-ahụ mmụọ nwayọ nke nkịta a. Ndị nwe ụlọ ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye wetara otu ụlọ agaghị enwe mmetụta nke owu ọmụma ọzọ. Otu Pitbull na-achọkarị ịma etu ị hụrụ ha n'anya. Ọ bụrụ na ị mesoo nkịta gị obiọma ha kwesịrị, ha ga-ahụ gị n'anya na nkwụghachi.
Nkịta nwere ike ịbụ nnukwu goofball ma nke ahụ apụtaghị na ha enweghị ọgụgụ isi.
Maka nkịta a ka ọ dị mma karịa, ọ dị mkpa ka ha nọrọ n'ọrụ.
Nke a pụtara ịnọ ọtụtụ ụbọchị na-egwu egwuregwu ma mụta ụzọ aghụghọ ọhụụ.
Pitbull Red Nose bụ enyi ndụ niile ị na-agaghị echezọ ma ọlị. Ọ bụrụ na ị nwere ike ime ohere n'ime obi gị maka otu ọ ga-dabara na ya.
Mee ka anyị mara ajụjụ ọ bụla gị gbasara Red Nose na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a ...
Samoyed Dog Breed: Ntuziaka nye ndị enyi a
Ubi Spaniel Dog zitere Ozi
kedu ihe bụ beagle lemon
ụlọ nyocha chọkọletị na ngwakọta ọkpọ
nkịta na -akwadoghị na -amụba na usa
obere nkịta na -agwakọta na poodles